संस्कृत भाषामाथिको प्रहार बन्द गर
केही वर्षयता संस्कृत भाषामाथिको प्रहार तीव्र बन्दै गएको छ। यसलाई ब्राह्मण तथा हिन्दु धर्म मान्नेको मात्रै र कर्मकाण्डी भाषाका रूपमा संकुचित गर्ने प्रयास व्यापक ढंगमा हुँदै आएको छ। कुनै पनि
दुवै गठबन्धन बलियो बन्न जरुरी
नेपाली राजनीतिका पछिल्ला दिनहरू निकै आश्चर्यजनक ढंगले परिवर्तन भएर अघि बढेका छन्। प्रमुख वाम दलहरूबीचको धुव्रीकरणले एकाएक तातिएको राजनीतिले नयाँ तरंग मात्र सिर्जना गरेन मानिसको सोच्ने तरिका र चेतनामा समेत
रमेशकेशरी वैद्य राजनीतिमा आउने पैसा कमाउने चाहना मात्र राख्ने यो अलि घिन लाग्दो रोग भएन र भने ? अब चुनाव जितेर आउने नेताहरुले कडा भएर मुलुकका लागि केही चमत्कार गर्ला
अशोक शोकी कीर्तिपुर लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि निर्वाचन एक चाड वा उत्सव हुने गर्दछ। हामी पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिक हौं, तर हामीमध्ये कतिलाई यो चाडबाड लागिरहेको छ र कतिले चाहिँ तनावको
निर्वाचन र आचारसंहिता एक–आपसमा जोडिएर आउने विषय हुन्। यति बेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको माहोल तातिएको बेलामा आचारसंहिताको कुरा झनै जोडतोड्ले उठ्ने गरेको छ। आचारसंहिता निर्वाचन आयोगले तयार गर्दछ र
पहिला पनि समाजवादको नारा नलगाएको हैन, आर्थिक समृद्धिको नारा नलगाएको हैन ? आखिर यी नारा चुनावका लागि मात्रसीमित भएका थिए। यही नाराको भरमा तपाईंहरु सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनुभएको
एक करोड युवाको व्यवस्थापन गर
नेपालको जनसंख्या ३ करोड पनि पुगेको छैन। २०६८ को जनगणना र त्यसयताको प्रक्षेपण हेर्दा अहिले नेपालको जनसंख्या २ करोड ८० लाखको हाराहारीमा छ। मानिसलार्य उमेर समूहका हिसाबले तीन समूहमा विभाजन
आक्रमणको त्रासमा निर्वाचन
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि, देशको निकासका लागि, स्थायी सरकारका लागि पहिलोपटक हुन गइरहेको संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने दिन गन्न शुरु भइसकेको छ। उम्मेदवारहरू निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्। पार्टी
सर्वेन्द्रको राम्रो काम
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले मंसिर १ गतेदेखि सबै विद्यालयका बस चालकले अनिवार्यरूपमा ड्रेस लगाउनुपर्ने नियम लगाएको विषय निकै राम्रो हो। विद्यालयस्तरीय युवा विद्यार्थीलाई बिग्रन नदिन विभिन्न किसिमका
शल्यचिकित्सामा बिरामीको मृत्युको सम्भाव्यताः एक कारण
डा. अनुपराज उपे्रती क्लिनिकल फर्मासिस्ट (डाक्टर अफ फार्मेसी) केही हप्ताअगाडि पित्तथैलीको शल्यक्रिया गर्दा बिरामीको मृत्यु भएको खबरले ओम अस्पताल परिसर निकै तातेको थियो। यस्तो शल्यक्रिया बिरामीलाई पूर्णरुपमा चेतना शून्य
यसकारण प्रचण्डले जित्नै पर्छ
चितवन नेपालकै मध्यभागमा छ। मेचीदेखि महाकाली होस् वा पश्चिम–पूर्वबाट राजधानी पुग्न चितवन भएर नै जानुपर्दछ। चितवनलाई नेपालकै ७६ औं जिल्लाको रुपमा हेरिँदै आइएको छ। त्यसो त चितवनलाई वैकल्पिक राजधानीको
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको समझदारीपत्र खारेज गरेसँगै इगोको राजनीति भएको प्रस्ट भएको छ। दलबीच विकासको विषयमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा एउटाको काम अर्को सरकारले असफल
निर्वाचन आयोग अझै चनाखो बनोस्
देशैभरि निर्वाचनको माहोल निकै तातिएको छ। माहोल तातिएसँगै अब निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका चर्चा–परिचर्चा पनि शुरु भएका छन्। निर्वाचनलाई धाँधलीरहित र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने सबैको दायित्व बराबर रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पटक–पटक